Translator Newsletter! Saritanin’ny Fiteny, Fandrindrana sy ny maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2019 3:37 GMT
Miarahaba ny GV rehetra!
Tonga soa eto amin'ity fizarana Translator Newsletter! amin'ity herinandro ity! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Pikantsary avy amin'ny https://www.washingtonpost.com
Mametraka sarintany sy kisarisary fito mahafinaritra ny Washington Post mba hanampy antsika hijery ny fitenin'izao tontolo izao sy ny fomba fahasamihafantsika tokoa amin'ny maha-olona antsika. Fantatrao ve fa efa ho roa ampahatelon'ny mponina manerantany no miteny Arabo, Espaniôla, Sinoa, Hindi-Urdu, Anglisy, na Bengali ho toy ny fitenin-drazany. Na izaho koa aza tsy mahalala! Jereo ary zarao ny eritreritrao. (ary misaotra ny namana GV iray, Romina Navarro, tamin'ny fizarana ny lahatsoratra!)
Nahoana ny fandikan-teny no toy ny mozika
Pikantsary nalaina tao amin'ny https://www.smartling.com
Namorona ity lahatsary lehibe antsoina hoe “Nahoana ny Fandikan-teny no Toy ny Mozika” ity ny olona mahafinaritra ao amin'ny Smartling, manaisotra ny hevi-diso momba ny indostrian'ny fandikan-teny izy ary mampiseho fa ny tena zava-misy dia mitombo isan'andro izany. Jereo ato izany raha te-hahafantatra fa toy ny mozika ny fandikanteny! (ary misaotra ny namana GV, Rami Alhames, tamin'ny nizarany ny lahatsoratra!)
Ho an'ny mpitia voambolana
Pikantsary avy amin'ny https://www.ted.com
Amin'ny maha mpandika teny, ny voambolana no fiainantsika! Raha toa ianao ka tahaka ahy, dia mpankafy teny goavana sy tia mianatra momba ny fiavian'ny voambolana sy ny fomba niforonany nandritra ny fotoana ianao. Tsara vintana isika, fa namolavola playlist mahafinaritra misy lahateny 12 ho an'ireo mpankafy voambolana tahaka antsika ny TED! Jereo ato izany rehetra izany!
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://translatorthoughts.com/
Efa nampiasa fehezanteny iray hafa tanteraka amin'ny fiteny kasainao ampiasaina ve ianao mba hampita ny hevitry ny fehezanteny amin'ny teninao? Antsoina hoe fampirindrana (modulation) izany ary efa nanao izany isika rehetra. Manampy amin'ny fananganana fahatsapana voajanahary bebe kokoa amin'ny lahatsoratra kendrena izany no sady mitazona ny lanjan'ny loharanon'ny lahatsoratra! Teknika fampiasain'ireo mpandika teny maro za-draharaha izany mba hamoronana fandikan-teny tsara. Fantaro bebe kokoa ato ny momba izany!
Toy ny mahazatra, misaotra anareo rehetra noho ny asa mafy ataonareo sy ny fanoloran-tenanareo ho an'ny GV! Raha manana fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra ianao, dia aza misalasala mandefa mailaka aty amiko marianna@globalvoices.org.